Tratran’ny FIP ambodiomby nisoloky olona ilay tovolahy… – Midi Madagasikara - Dago.news
Tratran’ny FIP ambodiomby nisoloky olona ilay tovolahy… – Midi Madagasikara
Nampiantso mpanao gazety mihitsy ny tonia mpampanoa lalana Toamasina, Atoa Rasamitiana Ladislas, noho ity tovolahy iray tratra ambodiomby nisoloky mpanan-draharaha eo anivon’ny fitsarana izay mifonja vonjimaika ao Ambalatavoahangy ny vadiny. Raha ny fanazavana dia nifankahita ity renim-pianakaviana manana olona ity sy ilay tovolahy milaza fa afaka mitady olona hanafaka ny vadiny any am-ponja.
Vokatr’izany dia nifanaraka ny roa tonta fa mandoa vola roa tapitrisa ariary omena olona eo anivon’ny fitsarana anafahana ny vadiny ilay ramatoa. Ny voalohany tamin’izany dia naloa teo amin’ny araben’ny fahaleovantena, ampahany voalohany tamin’ilay vola mitentina iray tapitrisa ariary. Voalaza tamin’izany koa fa aorian’ny fahafahan’ny vadiny am-ponja dia homena indray ny ampahany faharoa iray tapitrisa ariary. Efa vonona tany amin’ilay ramatoa ny ambim-bola ny alakamisy teo, satria efa hita ilay mpitsara hikarakara ny raharaha, dia ny mpitsara mpanao famotorana mihazona ny antontan-taratasin’ilay rangahy. Teo no niseho avokoa ny marina rehetra tamin’ny fisolokiana nataon’ity tovolahy ity. Nanome baiko ny FIP ny lehiben’ny fampanoavana noho ny ady amin’ny kolikoly sy ireo mpisoloky olona amin’ny fitsarana, na ireo “rabatteur” nolazainy nandritra ny fametrahana azy, ka tratran’ny polisy ambodiomby teo am-pandraisana ny ampahan’ny vola faharoa ilay tovolahy, satria mbola hita teny aminy izany vola be izay. Taorian’ny fiakarana polisy misahana ny heloka be vava nanaovana ny fanadihadiana ity mpisoloky ity, dia niakatra fampanoavana ny fitsarana ny tenany ny zoma misandratra andro teo, ka miandry fitsarana azy am-ponja. Nambaran’ny lehiben’ny fampanoavana fa henjana ny sazy omena ireo olona mpisoloky sy misandoka anarana mpitsara amin’ny fisolokiana ataony any ambadika any, satria ireny olona ireny no tena mandoto sy manimba ny fitsarana eto Toamasina.
Tsy mifarana hatreo ny ady ataon’ny fitsarana amin’ireo mpisoloky olona eo anivon’ny fitsarana fa hitohy izany, araka ny tenin’ny lehiben’ny fampanoavana Toamasina. Raha ny fanazana mantsy dia nisy olona roa lahy hafa niara-tratra tamin’ity tovolahy ity, mpanao izany “rabatteur” izany, saingy tsy tao anatin’ny raharaha izy ireo raha natao ny fanadiadiana ary tsy tratra ambodiomby nandritra ny fisavana azy ireo, ka misy ny fanaraha-maso atao ho azy ireo mba tsy hiverina intsony ny tranga misy tahaka izao.